Apple wuxuu ku faanaa darajo iyo Samsung oo aan lahayn | Wararka IPhone
Darajo ama maya darajo?
Nacho Aragonés | | iPhone X
Tan iyo markii la soo saaray iPhone X waxaa jiray laba wada hadal oo weyn: Aqoonsiga Wajiga (iyo ka takhalusida Aqoonsiga Taabashada) iyo "uruursiga", ama tab, ama dhaafid, ama waxkastoo aad rabto inaad ugu yeerto.
Macno malahan haddii fikradaha ay yihiin kuwo togan ama taban, xaqiiqda, taasi kuma xirna tartanka. Waxa tartanku u baahan yahay inuu go'aansado waa inuu nuqul ka sameeyo ama uusan nuqul ka dhigin, adoo ka faa'iideysanaya go'aankaaga.
Ka hor Shirka Caalamiga ah ee Wareegtada ee dhacaya, waxaan aragnay soosaarayaal badan oo koobiyeeya darajada. Marar badan oo aan lahayn shaqo dhab ah, ama xitaa nuqul adigoo isticmaalaya softiweer. Wax u eg sida daloolka derbiga dushiisa telefishanka, iyo in telefishanka uu jiro oo kaliya inuu soo saaro derbi bilaa dillaac ah.
MWC waxaan ku aragnaa nuqulo badan oo dheeraad ah, mararka qaarna waa iska cad yihiin. Laakiin waxaan sidoo kale aragnaa ka soo horjeedka Samsung. Way cadahay in Samsung uusan ciyaari karin si uu u nuqulo Apple-ugu yaraan maahan wax walba- taleefankaaga calanka ah sannad kasta. Waxay la mid noqon laheyd sameynta bacda Hermès Birkin, oo aan ku iibin doono wax ka badan $ 10,000, sidoo kale. Way ka fiican tahay inaad iibsato Hermes asalka ah.
Sababtaas awgeed, Samsung waa inay ciyaar kale ciyaartaa, waa inay ku sharraxdo wax kala duwan oo ay uga faa'iideysato sida ugu habboon isaga. Waan qirayaa Kala duwanaanta Galaxy S ee Samsung waa mid cajiib ah. Galaxy S8, oo ay weheliyaan Nexus 6P iyo madow iPhone 5, waa qaar ka mid ah taleefannada ugu qurxoon ee aan abid arko.
Ma dhihi karno wax yar oo ku saabsan Galaxy S9. Waxay ku haysaa shaashaddeeda geesaha wareegsan, oo in kasta oo aysan waxtar badan lahayn, haddana waan jeclahay iyaga, oo ku dhowaad gees kuma leh dusha sare ama hoose. Taabashada kala duwan ee Galaxy S9 iyo Samsung waa shaashadan, Muuqaalka Infinity.
Dabcan, Samsung ma soo bandhigi karto tan iyada oo aan sheegin in aysan lahayn "qaanuun". Waxaan idhi, haddii aad Apple nuquliso, taasi waa ciyaartaada. Haddii aadan koobiyeyn waxa ay sameyneyso, waxaa fiican inaad dhahdo ma aadan sameyn oo sharax sababta (xitaa haddii ay been tahay).
Samsung waxay sameyn kartay "notch", waxa aysan awoodin inay sameyso waa Face ID taasi waxay u saamaxaysaa Samsung inay sameyso la’aan akhristaha faraha. Samsung kee ayaa iftiimiyay inuu yahay mid ka mid ah hababka ugu cadcad ee lagu furo taleefankaaga. Midka ugu jecel qaababka badan ee aad leedahay maadaama aysan garanayn midka ay diiradda saarayaan.
Waxaa macquul ah in S10 uu leeyahay "Face ID" oo laga yaabo inuu yahay habka kaliya ee furaha, waana arki doonaa sida ay cudurdaarka u leeyihiin. Ilaa waqtigaas, Waxaan kuu dhaafayaa fiidiyowga soo bandhigida oo ay ku sii daayaan wax ka badan hal feer iPhone X.
Sidaas "uruursanayey" ama ma "uruursaday"? Jawaabtaydu waa taas, Apple, haddii "qaan-gaar". Sababo badan awgood. Midka koowaad waa midka ugu yar ee muuqda laakiin dhab ahaantii kan ugu muhiimsan dhammaantood: Shaxda 'iPhone'. Inaad karti u yeelatid inaad iPhone meel fog ka fiiriso oo aad dhahdo waa iPhone sababtoo ah "darajo" taas darteed. Tan waxaa lagu magacaabaa calaamadeyn, oo Apple ayaa si fiican u daryeela.
Haddii kale, hadda ka fikir imisa jeer ayaad ku kala soocday iPhone damis sida iPhone illaa hadda, si fiican adoo fiirinaya badhanka Guriga ee wareegaya. Marar badan daboolida ayaa ah mid aad u qaro weyn oo aad u tiro badan oo dhib ka dhigaya in la kala saaro taleefanka ku dhex jira, laakiin badhanka Guriga ayaa had iyo jeer la dhahaa: "Waxaan ahay iPhone." Hadda waxaan haynaa "uruursiga". Adduunyada oo taleefannadu dhammaantood ka horreeyaan muraayad, sida keliya ee lagu kala garto waa iyada oo shay waligiis shaashadda ka muuqda, wayna ku guuleysteen.
Sababaha intiisa kale ee loo leeyahay "notch" waa, halkii, sababaha loo yiraahdo "dhib malahan waxa ay tahay". Tusaalaha ugu runta badan ee ra'yiga iPhone X iyo "caan" waa hooyaday. Waxay siiyeen iPhone X-ga Kirismaska.Wuxuu jecel yahay. Waxaan kuu diyaarinay aqoonsi Face ah daqiiqadaha ugu horeeya adigana waad heshay. Ma guul darreysto isaga. Waxa kale oo uu fahmay xilligan tilmaamaha cusub, oo ilaa maantadan la joogo, gebi ahaanba dabiici ahaan u soo baxa (xitaa iPad-ka, oo aanay ka shaqayn).
Y "notch" waa wax si isku mid ah u siiyay. Isaga ma weydiin waxa ay tahay, ma uusan weydiinin sababta ay u jirto, waxbana ma uusan sheegin. Ama si kale u dhig, waa dan la'aan. Tani waa ra'yi aan ka maqalnay dad badan oo adeegsada iPhone X: "5 daqiiqo kadib waxaad iloobeysaa inay halkaas jirto." Waana run.
Ma jiraan sababo la isku dayo in laga takhaluso "uruursiga" moodooyinka mustaqbalka, waa wax aan dhib lahayn. Si kastaba ha noqotee, waa wax soo kordhinaya sawir badan oo summad leh, wada hadallo badan, xayeysiin badan. Oo, waad ogtahay, ma jiro wax xayeysiis ah oo xun.
Waxaan si dhib yar u qiyaasi karaa qof Jooji iibsashada iPhone X oo aad doorbideyso Samsung Galaxy S9 sababtoo ah "darajo". Tanina, aakhirka, waa waxa muhiimka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone X » Darajo ama maya darajo?
Iyagu ma koobi doonaan doonaa oo ku faani doonaan. Laakiin bandhigyadiisu waa nuqulo lagu qoslo oo nuxurka ka hadlaya ... oo qofka si deggan u hadla wuu ka fadhiisan karaa masraxa. aan qoraal lahayn oo aan dhimbiillo lahayn.
Weli waxay hayaan waddo dheer oo ay ku aadaan inay ku bilaabaan aragtida hooska Apple
Gebi ahaanba waan ku raacsanahay qodobka, sidoo kale waxaan door bidayaa habeenka oo waxaan leeyahay shaashadda ugu badan ee aan leeyahay kooxo madow, waa wax aan dhibaynin mana garanayo waxa ay tahay, shaashadda ayaa ka sii fiican, ka hor intaanay dhihin inay badan leedahay iphone frames oo hada waxay ka cawdaan in ay yaryihiin, Waxay noqon doontaa arin in badhan la dhigo iyo in kaamirooyinka iyo dareemayaasha ay ka soo baxaan gudaha mobilada si fiican xitaa marka horeba waxay raadin doonaan wax ay dhahaan, in badhanka uusan sida qaabka, runti habeenku waa wax kala sooca iyo sida kaliya ee lagu heli karo shaashadda ugu badan ee suurtogalka ah.
Aragtidayda, in iphone X la siiyo hooyo waa lacag lumis, xk si ay u barato isticmaalka WhatsApp-ka una qaado 4 sawir taas oo aan ugu iibsado android € 150, ma u isticmaali doonto sida ay ku siin karto geek ah.
Ma taqaanid hooyaday, way tusaysaa.
Jawaab Nacho Aragonés
Marka waxaad doorbideysaa inay yeelato darajo si dadku u ogaadaan inaad leedahay iPhone, haddii kale dadku waxay u maleynayaan inay tahay taleefan kale. Uguyaraan waxaad tahay qof daacad ah oo qaab aad uqirato inaad haysato iPhone muuqaal ahaan, maaha sababtoo ah waa taleefan kafiican.
Runtu waxay tahay inuu kahadlayay heerka shirkada, ha ahaato ama yaanay samayn taleefannada gacanta ee "notch" iyo sida Apple uga faa'iidaysatay wax muran dhaliyay. Waxa kaliya ee aan ku iri heerka isticmaalaha, dhowr jeer, waa inaysan wax micno ah lahayn maxaa yeelay waxaad ku dhamaanaysaa inaadan arkin ama aanad u fiirsan.
Waxay ila tahay waxa aad dhahdo caqligal yar, hadaan iibsado Ferrari waxaan rabaa in la ogaado in aan joogo Ferrari ma aanan arkin wax Ferrari ah oo wata cambuulada panda (baabuur aad uwanaagsan oo panda ah dhinaca, wajiga ilaa dayactirka, dhib la'aan oo u shaqeeya sida ugu fiican), telefoonada gacanta maaha sababta oo ah waa iPhone, haddii aan jeclaado Samsung oo aan iibsado kan ugu dambeeya waxaan jeclahay inaan arko inay tahay tan ugu dambeysa ee waxa aan jeclahay, markaa kuwa daahiriya yaa u sameeya whatsapp kuna wacaa moobil xxxxx Waayahay, haa, laakiin waan awoodaa maxaa yeelay dhaqaalahaygu wuu oggol yahay, waana jeclahay tikniyoolajiyadda iyo taleefannada gacanta maxaa yeelay waa macquul in aan iibsado waxa aan jeclahay, waana run in shaashadda la eego adiga Ogow inay tahay iPhone X iyo Calaamaddu waa wax kala sooc ah, waa wax nooc kasta oo kale ah ay ku fiicnaan lahayd in taleefankiisa gacanta uu ka dhex muuqdo inta kale, waa wax aan caqli gal ahayn in qofna wax laga weydiiyo waxa ay jecel yihiin ama waxa lacagtooda ah waa lagu qarash gareeyay, qof kasta oo iibsada waxa uu ugu jecel yahay, qof walba mobilada ayaa leh waxyaabo fiican iyo kuwo xun oo ay ku kala duwan yihiin, waa maxay dhibaatada jirta Aynu dooranno midka aan jecelnahay, ma daneeyo iPhone, Samsung, Xiaomi, iwm. in mid kastaa iibsado wuxuu doonayo iyo wixii uu doonayo, yeynaan cidna u saarin u qalmid taas.
Sankaas, waa wax laga naxo meel kasta oo aad eegto, xitaa waxay i siinaysaa madax xanuun inaan marwalba ka feejignaado sanka yar ee sanka uqalma mudnaanta, sababtaas ayaan u iibsaday iphone 8 oo lagu daray 256gb, waan ogaa inaan marwalba ka fikiri doono kooxda Black, sawirada ciyaaraha ee barnaamijyada, waana u adkeysan waayey, sidoo kale waxaan u mahad celinayaa labada karbaash ee korka iyo hoose ee iphone 8 aad sifiican ayaad uqabsankartaa markaad ciyaareyso, waxaan isku dayey iphone x iyo wuxuu u ekaa kalluun sibiibix ah.
Ma jeceshahay barafka ama barafka barafka oo ma leedahay Apple Watch Series 3? Hadda waxaad arki doontaa waxqabadkaaga saacadda
Roobka Alarm XT, waa la cusbooneysiiyay oo bixiya taageerada iPhone X